မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဝိတ်ချနေသူတွေ ဘာ့ကြောင့် ကန်စွန်းဥစားသုံးသင့်တာလဲ ?
ဝိတ်ချနေသူတွေ ဘာ့ကြောင့် ကန်စွန်းဥစားသုံးသင့်တာလဲ ?
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချ နေတဲ့သူတွေကို အာဟာရလည်း ပြည့်ဝပြီး ဝိတ်ကျစေနိုင်တဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကလေးလူကြီး မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး အရသာကောင်းမွန် လှတဲ့ ကန်စွန်းဥပါပဲ။ ဝိတ်ချနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ကန်စွန်းဥကို Diet Plan မှာထည့်သွင်း စားသုံး သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အရသာလည်းရှိပြီး အလွယ်တကူပြုတ်စားနိုင်တဲ့ ကန်စွန်းဥက ဝိတ်ချနေသူတွေ ဘာ့ကြောင့် စားသုံး သင့်လဲ ဆိုတာကို ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအဖြစ် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ဝိတ်ချနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးပြီး ကယ်လိုရီကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့ချဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ ကန်စွန်းဥက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်များကို ပေးစွမ်း နိုင်သလို၊ ကယ်လိုရီမြင့် တက်မှုအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုတာကြောင့် Diet Plan မှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ထည့်သွင်း ထားလို့ရပါတယ်။ များသော အားဖြင့်တော့ ကန်စွန်းဥပြုတ်ကို စားသုံးပေးကြပါတယ်။
ကန်စွန်းဥက အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချနေသူတွေ စားသုံး နိုင်ပါတယ်။ အမျှင် ဓာတ်က အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အထိန်းအကွပ်မဲ့ စားသောက် နေမိတာမျိုး မဖြစ် တော့ ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အစာချေဖျက်လမ်းထဲက အဆိပ်အတောက်များနဲ့ အဆီများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင် တာကြောင့် ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုး ပါပဲ။
ဝိတ်ချနေတဲ့သူအဖို့တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ အဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်ပြီး ဝိတ်ကျစေမှာပါ။ ကန်စွန်းဥက ရေဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အဆီပို များကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ကျန်းမာပေါ့ပါး သွက်လက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဝိတ်ချနေသူတွေ ကန်းစွန်းဥကို မဖြစ်မနေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
(၄) Antioxidants ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အောက်ဆီဂျင်၊ အန်တီအောက်စီးဒန့်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း လည်ပတ်နေမှ ကျန်းမာလှပတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက် မရှိဘူးဆိုရင် စိတ်ဖိစီး မှုများပြီး တစ်ဖန် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အဝလွန်လာရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Antioxidants ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ကန်စွန်းဥကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Author MSSK at 12:45:00 PM
Labels: ၀သောသူများအတွက်ဝိတ်ချနည်း, ကျန်းမာရေး